Tsena fahagola sy parasy | Tsidiho i Hultsfred
Mihazakazaha eo an-toerana!
Makà fotoana hiarahana amin'ny tsenan'ny parasy. Mahay tontolo iainana, mora vidy ary ambonin'izay mahafinaritra rehetra! Famolavolana kilasika na karazan-gisa hafahafa - parasy eo an-toerana ary mahita perla vaovao.
Tongasoa eto amin'ny fivarotana tanana faharoa an'ny tsenan'ny Lions 900 m². Rihana roa misy fanaka sy gorodona iray manontolo misy zavatra kely.
Greenhouse dia fivarotana tanana faharoa mahafinaritra miaraka amin'ny entana maro atolotra, zavatra manontany tena ianao fa afaka mitsidika ny tranokalanay. Tongasoa eto Greenhouse!
Tsena parasy fifaliana
Ny tsenan'ny parasy Lyckans dia manolotra entana an-tanana mahafinaritra izay tsy ho leo anao. Eto ianao no hahita ny zava-drehetra amin'ny vidiny lafo.
Tongasoa anao i Kupan amin'ny fivarotana an-tanan-dry zareo mahafinaritra. Misokatra eo anelanelan'ny 10-16 amin'ny zoma, asabotsy ary alahady.
Tongasoa eto amin'ny tsenan'ny parasy Linus, fivarotana tanana mahafinaritra mahafinaritra feno entana faharoa.
Tongasoa eto Virserums Möbellager izay tsena parasy 900 m². Rihana roa misy fanaka ary gorodona iray manontolo misy zavatra kely.
Mörlunda Loppis dia somary lavitra tsy lavitra ny fiangonana Mörlunda ary manafina trano fitehirizana entana feno entana maro be. Ireto misy fitaovana, fanaka, fahagola, boky
No6 Cool Antik & Retro Kafe Retro sy fahagola misy fanaka sy curios tsara. Bara fisotro misy divay sy fanolorana sakafo maivana. No6 Cool Antique & Retro
Tongasoa eto amin'ny JT Antikt any Hultsfred amin'ny norra orskarsgatan.
Fifanarahana amin'ny Stegen tanana faharoa ao Hultsfred! Mivarotra kojakoja ao an-trano, fanaka, fahagola, boky ary maro hafa.
Fivarotana haingon-trano ao an-trano i Hannes Boutique any Virserum. Haingo an-trano, fanaka, taloha sy vaovao. Ora fanokafana: Alatsinainy - Zoma 14-18 Ora fanokafana
Tsenan'ny fiangonana Ekeberg faharoa sy tsena parasy
Fivarotana fitaovana ao an-trano, fanaka, lamba, boky ary fahagola. Hevitra